Somaliland diyaar bay u tahay inay xidhiidh la yeelato Isreal. |
HomeArrimahabulshadaSomaliland diyaar bay u tahay inay xidhiidh la yeelato Isreal.
Wararka qaarkood ayaa sheegay inay Somaliland door-bidayso inay ka mid noqoto dalalka Muslimka ah ee heshiiska la galay Isreal, taas uu ku soo beegmi karta xilligan oo uu soo fiicnaanayo xidhiidhka Isreal iyo dunida Muslimka ah.
Wargeyska BusiWeek ayaa soo weriyey in Somaliland danaynayso Xidhiidh ay la yeelato Isreal,
Agaasimaha sirdoonka Israel Eli Cohen ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu ku sheegay in dalkiisa uu heshiis nabadeed la galayo laba dal oo midna uu yahay Geeska Afrika iyo mid aan ka fogeyn gobolka.
Isagoo Wargeysku u daliishaday Xildhibaano ka mid ah Golaha Baarlamaanka Somaliland oo Waraysiyo si gaar gaar ah looga qaaday ku sheegay inay muhiim tahay in Somaliland xidhiidh la yeelato Isreal.
Xildhibaannadan uu Wargeysku soo xigtay oo kala ah Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye (Nac-nac) oo ka mid ah Golaha Wakiillada,
Xildhibaan Cabdiqaadir Indho-indho oo ka mid ah Golaha Guurtida iyo Xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi oo ka mid ah Golaha Wakiillada ayuu Wargeysku sheegay inay Markhaati u tahay in Somaliland danaynayso xidhiidh ay la yeelato Isreal.
Ugu dambayn, War-bixinta uu Wargeysku arrintan kaga hadlay oo uu Ciwaan uga dhigay ‘Somaliland diyaar bay u tahay inay xidhiidh la yeelato Isreal..’, ayuu kaga warramay Ahmiyadda dhuleed ee Somaliland,
Badda Cas iyo marinka Bab el-Mandab oo Somaliland noqon karto goob laga difaaco ama laga ilaaliyo Maraakiibta sida joogtada ah u isticmaala, taasi oo uu Wargeysku xusay inay muhiim ka sii dhigayso xidhiidh dhex mara Somaliland iyo Isreal